"မယားတစ်ရက် ကျေးဇူးတစ်ရာ" - Barnyar Barnyar
မိန်းမသားတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်မယားလို့ သက်မှတ်လိုက်တဲ့ အဲဒီတစ်ရက်ကို တစ်သက်လုံး မှတ်ထားမိဖို့ အလွန်အရေးကြီးတယ်။ အခုယူ အခုကွဲကြတာတွေ လောကမှာ မြင်ရတာတွေက အများကြီးပဲ ဒါတွေဟာ ချစ်လို့လက်ထပ်တာ ဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် သံယောဇဉ်တွေကြောင့် လက်ထပ်ခဲ့တာမျိုး မဟုတ်ခဲ့ကြလို့ပါ။
သံယောဇဉ်ဆိုတာမျိုးက ဖြတ်တောက်ရတာ အလွန်ခက်တဲ့အရာမျိုး ဘာနဲ့တူသလဲဆိုရင် မျှော့သရေဖက်နဲ့တူတယ် သူ့ကိုစွဲလေလေ သူဟာ ရှေလာလေပဲ။ အချစ်ဆိုတဲ့ အရာမျိုးက ထန်းလျှက်ခဲကို ဝါးစားနေရသလိုမျိုးပါ စားနေတုန်းခဏတာပဲ စားနေသူချိုစေတာပါ။
မယားက မျက်စိဆိုရင် လင်ယောက်ျားက လက်ဖြစ်ရပါမယ် ဘာအကြောင်းကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် မယားဖြစ်သူမှာ မျက်ရည်ကျတာမြင်ရင် လင်ယောက်ျားက လက်နဲ့သုတ်ပေးတတ်ရတယ် ဒါဟာ အချစ်လို့ ခေါ်မလား ? ဒါမှမဟုတ် ယုယခြင်းတွေလို့ ခေါ်ရမလား ?
တစ်ခုမှ မဟုတ်ပါဘူး ဒါဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်ခြင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကာမဂုဏ်ခံစားဖို့ တစ်ခုတည်းအတွက်နဲ့ တစ်ခဏသာပေါင်းသင်းပြီး လမ်းခွဲလိုက်ရင် ဒါဟာ တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဘာထူးတော့မှာလဲ မိန်းမသားတစ်ယောက်ကို မယားအဖြစ် သက်မှတ်တဲ့ အဲဒီတစ်ရက်ဟာ တစ်သက်လုံး ဒီမယားကို စံအတူ ခံအတူ ပေါင်းသင်းနေထိုင် သွားရတော့မယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားပါ ဒါကိုနားလည်ထားဖို့လိုတယ်။
ခွေးတစ်ကောင်ဟာ သူ့ကိုထမင်းတစ်လုတ် ကျွေးတဲ့ လက်ကို အနည်းဆုံး [ ၅ ] နှစ်ထိ မေ့မသွားဘူးတဲ့ ခွေးတွေကပဲ အမှတ်သားကောင်းတာလား လူတွေကပဲ အသိဥာဏ် နည်းတာလားတော့မသိ တစ်ချို့လူတွေကတော့ သူတို့ဗိုက်ဝသွားရင် ကျောပြင်ပဲ မြင်ရတော့တာများတယ်။
တနေ့ တနေ့ကိုယ့်ဆီ လာတဲ့သူတွေဟာ ဘယ်လိုလူတွေက အများဆုံးလို့ ထင်ပါသလဲ ကူဖို့လာတဲ့ သူတွေလား ? ပူဖို့လာတဲ့ သူတွေလား ? ယူဖို့လာတဲ့ သူတွေလား ? ပူဖို့ပဲလာလာ ယူဖို့ပဲလာလာ ပူပြီးရင် ယူပြီးရင်တော့ အဲဒီကျေးဇူးကို မမေ့ပါနဲ့ ပြန်ဆက်ဖို့လည်း မမျှော်လင့်ပါဘူး ကျေးဇူးပါနော် …ဆိုတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းတော့ ဆိုပြခဲ့ပေးပါ အသက်မဲ့နေတဲ့နှုပ်ခမ်း တစ်ခါတလေ ပြုံးဘူးချင်လို့ပါ။
တနေ့က စာရေးသူ ကွမ်းစားချင်လို့ ကျောင်းသားလေးကို ကွမ်းရွက်ဝယ်ခိုင်းဖြစ်တယ် သူ့ခင်မျာ ထီးတစ်ချောင်းနဲ့ မိုးတောထဲသွားရတာ ပြန်လာတော့လည်း အဲဒီကွမ်းရွက်လေးတွေ ဆေးပေးပါဦးကွာလို့ ဆက်ခိုင်းဖြစ်တယ် ဆေးပြီးသားကွမ်းရွက်တွေ လာပေးတော့ သူ့ရဲ့အောက်တစ်ပိုင်းလုံး မိုးရေတွေရွှဲနေပီ။
ဒါပေမယ့် စာရေးသူရဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကြောင့် မိုးစက်တွေကြားကသူ့မျက်နာလေးပြုံးသွားတယ် သူ့ကိုဘာပြောလိုက်တာလည်းဆိုရင် ကျေးဇူးနော်…… ညီလေးဆို တဲ့ စကားတစ်ခွန်းပါ။ ဟုတ်ပါတယ် ဘယ်လိုကျေးဇူးမျိုးဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အပေါ် တစ်ခါတင်တဲ့ ကျေးဇူး
အသက်တစ်ရာထိ မမေ့ရပါဘူး ကျေးဇူးမကန်းကြပါနဲ့ ။
တစ်ချို့သောကျေးဇူးတွေက စကားလေးတစ်ခွန်းတည်းနဲ့လည်း တစ်ဖက်သူကို ကျေနပ်အောင် ကြေအောင်ဆပ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။
❝ဒါ့ကြောင့် မယားအပေါ်လည်း ကြေစေ ကျေးဇူးကိုလည်းခြေစေ တဲ့ ❞ မယားတစ်ရက် ကျေးဇူးတစ်ရာ
မိနျးမသားတဈယောကျကို ကိုယျ့မယားလို့ သကျမှတျလိုကျတဲ့ အဲဒီတဈရကျကို တဈသကျလုံး မှတျထားမိဖို့ အလှနျအရေးကွီးတယျ။ အခုယူ အခုကှဲကွတာတှေ လောကမှာ မွငျရတာတှကေ အမြားကွီးပဲ ဒါတှဟော ခဈြလို့လကျထပျတာ ဟုတျခဲ့ပမေယျ့ သံယောဇဉျတှကွေောငျ့ လကျထပျခဲ့တာမြိုး မဟုတျခဲ့ကွလို့ပါ။
သံယောဇဉျဆိုတာမြိုးက ဖွတျတောကျရတာ အလှနျခကျတဲ့အရာမြိုး ဘာနဲ့တူသလဲဆိုရငျ မြှော့သရဖေကျနဲ့တူတယျ သူ့ကိုစှဲလလေေ သူဟာ ရှလောလပေဲ။ အခဈြဆိုတဲ့ အရာမြိုးက ထနျးလြှကျခဲကို ဝါးစားနရေသလိုမြိုးပါ စားနတေုနျးခဏတာပဲ စားနသေူခြိုစတောပါ။
မယားက မကျြစိဆိုရငျ လငျယောကျြားက လကျဖွဈရပါမယျ ဘာအကွောငျးကိစ်စပဲဖွဈဖွဈ မယားဖွဈသူမှာ မကျြရညျကတြာမွငျရငျ လငျယောကျြားက လကျနဲ့သုတျပေးတတျရတယျ ဒါဟာ အခဈြလို့ ချေါမလား ? ဒါမှမဟုတျ ယုယခွငျးတှလေို့ ချေါရမလား ?
တဈခုမှ မဟုတျပါဘူး ဒါဟာ ငွိမျးခမျြးရေးကို တညျဆောကျခွငျးလို့ ချေါပါတယျ။ ကာမဂုဏျခံစားဖို့ တဈခုတညျးအတှကျနဲ့ တဈခဏသာပေါငျးသငျးပွီး လမျးခှဲလိုကျရငျ ဒါဟာ တိရစ်ဆာနျတှနေဲ့ ဘာထူးတော့မှာလဲ မိနျးမသားတဈယောကျကို မယားအဖွဈ သကျမှတျတဲ့ အဲဒီတဈရကျဟာ တဈသကျလုံး ဒီမယားကို စံအတူ ခံအတူ ပေါငျးသငျးနထေိုငျ သှားရတော့မယျဆိုတဲ့ သဘောတရားပါ ဒါကိုနားလညျထားဖို့လိုတယျ။
ခှေးတဈကောငျဟာ သူ့ကိုထမငျးတဈလုတျ ကြှေးတဲ့ လကျကို အနညျးဆုံး [ ၅ ] နှဈထိ မမေ့သှားဘူးတဲ့ ခှေးတှကေပဲ အမှတျသားကောငျးတာလား လူတှကေပဲ အသိဥာဏျ နညျးတာလားတော့မသိ တဈခြို့လူတှကေတော့ သူတို့ဗိုကျဝသှားရငျ ကြောပွငျပဲ မွငျရတော့တာမြားတယျ။
တနေ့ တနကေို့ယျ့ဆီ လာတဲ့သူတှဟော ဘယျလိုလူတှကေ အမြားဆုံးလို့ ထငျပါသလဲ ကူဖို့လာတဲ့ သူတှလေား ? ပူဖို့လာတဲ့ သူတှလေား ? ယူဖို့လာတဲ့ သူတှလေား ? ပူဖို့ပဲလာလာ ယူဖို့ပဲလာလာ ပူပွီးရငျ ယူပွီးရငျတော့ အဲဒီကြေးဇူးကို မမပေ့ါနဲ့ ပွနျဆကျဖို့လညျး မမြှျောလငျ့ပါဘူး ကြေးဇူးပါနျော …ဆိုတဲ့ စကားလေးတဈခှနျးတော့ ဆိုပွခဲ့ပေးပါ အသကျမဲ့နတေဲ့နှုပျခမျး တဈခါတလေ ပွုံးဘူးခငျြလို့ပါ။
တနကေ့ စာရေးသူ ကှမျးစားခငျြလို့ ကြောငျးသားလေးကို ကှမျးရှကျဝယျခိုငျးဖွဈတယျ သူ့ခငျမြာ ထီးတဈခြောငျးနဲ့ မိုးတောထဲသှားရတာ ပွနျလာတော့လညျး အဲဒီကှမျးရှကျလေးတှေ ဆေးပေးပါဦးကှာလို့ ဆကျခိုငျးဖွဈတယျ ဆေးပွီးသားကှမျးရှကျတှေ လာပေးတော့ သူ့ရဲ့အောကျတဈပိုငျးလုံး မိုးရတှေရှေဲနပေီ။
ဒါပမေယျ့ စာရေးသူရဲ့စကားလေးတဈခှနျးကွောငျ့ မိုးစကျတှကွေားကသူ့မကျြနာလေးပွုံးသှားတယျ သူ့ကိုဘာပွောလိုကျတာလညျးဆိုရငျ ကြေးဇူးနျော…… ညီလေးဆို တဲ့ စကားတဈခှနျးပါ။ ဟုတျပါတယျ ဘယျလိုကြေးဇူးမြိုးဖွဈဖွဈ ကိုယျ့အပျေါ တဈခါတငျတဲ့ ကြေးဇူး
အသကျတဈရာထိ မမရေ့ပါဘူး ကြေးဇူးမကနျးကွပါနဲ့ ။
တဈခြို့သောကြေးဇူးတှကေ စကားလေးတဈခှနျးတညျးနဲ့လညျး တဈဖကျသူကို ကနြေပျအောငျ ကွအေောငျဆပျလို့ ရနိုငျပါတယျ။
❝ဒါ့ကွောငျ့ မယားအပျေါလညျး ကွစေေ ကြေးဇူးကိုလညျးခွစေေ တဲ့ ❞ မယားတဈရကျ ကြေးဇူးတဈရာ
သမီးတော်အဖြစ်နဲ့ အနှစ်၂ဝ- မိဖုရားအဖြစ် ၁ရက်- တော်ဝင် မင်းသမီးအဖြစ် ၁ဝလ- အထိန်းတော်အဖြစ် တစ်သက်…